प्रितीले प्रकाशलाई ……. भन्दा खतरा दोहोरी, दोहोरी ब्याटल ३ चोटी गाउदा पनि पुगेन दर्शकलाई – Complete Nepali News Portal
प्रितीले प्रकाशलाई ……. भन्दा खतरा दोहोरी, दोहोरी ब्याटल ३ चोटी गाउदा पनि पुगेन दर्शकलाई
गुल्मी । गुल्मी चेम्बर अफ कमर्स, गुल्मीको आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको पर्यटन तथासास्कृतिक महोत्सब एंब ब्यापार मेला २०७५ मा सबै प्रस्तुति सकिएपछि चर्चित कलाकारहरु बिच दोहोरी पनि राखिएको थिया त्यो पनि लाइभ दोहोरी, जसमध्ये आज भिडेका थिए चर्चित लोक गायक तथा गायिका जस्ले आफनै ब्याटलमा गाउदै यस्तो बब्बाल गरे ।
११ दिन सम्म सदमुकाम तम्घासमा सञ्चालन हुने महोत्सवले यति बेला गुल्मी जिल्ला महोत्सबमय बनेको छ । आज यसै बिच लोक तथा दोहोरी गायक प्रकाश सपुत र प्रिती आले बिच दोहोरी घम्साघम्सी भएको छ ।